Xog Cusub Oo Laga Helay Haddii Ay Xaqiiq Ahayd Warkii Lagu Shaaciyay In Messi Uu Gudbiyay Warqada Bixitaankiisa Barcelona. - Gool24.Net
Xog Cusub Oo Laga Helay Haddii Ay Xaqiiq Ahayd Warkii Lagu Shaaciyay In Messi Uu Gudbiyay Warqada Bixitaankiisa Barcelona.
Intii lagu jiray 24 kii saacood ee la soo dhaafay waxaa jiray warar is khilaafsan oo ka soo baxay mustaqbalka Lionel Messi ee kooxdiisa Barcelona iyada oo ay jireen warar sheegayay in uu haddaba dhiibay warqada dalabka bixitaankiisa.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaan codsanin inuu ka tagaayo Camp Nou ka dib guul daradii waynayd ee Blaugrana kasoo gaadhay Tartanka horyaalka Yurub ee Champions League-ga sida uu qoray wargayska Evening Standard.
Jabkii Barcelona ka soo gaadhay kooxda Bayern Munich ayaa gabi ahaanba shaki galiyay mustaqbalka inta ugu badan ee ciyaartoyda Barcelona laakiin Messi oo markii horeba uu heshiiskiisa ku jiray qodob u ogolaanaya in xagaagan uu si xor ah u bixi karo ayaa noqday kan ugu hadal haynta badnaa.
Xili ciyaareedkan oo dhan waxaa soo jiray shaki la galinayay mustaqbalka Lionel Messi laakiin maamul xumada iyo tababarayaasha uu Bartomeu ku soo fashilmay in ay kooxda wax ka badalaan ayaa keenay in Messi uu gaadhay niyadjabkii abid ugu waynaa.
Laakiin wararka hadda soo baxaya ayaa sheegaya in Lionel Messi aanu si rasmi ah u gudbin dalabka bixitaankiisa balse ay jireen han jabaad uu ku muujiyay in ay suurtogal noqon karto in uu bixi doono gaar ahaan xaalada ay kooxdu ku jirto.
Boodhka kooxda Barcelona ayaa shir deg deg ah layskugu yeedhay waxaana la filayaa in Bartomeu uu ku dhawaaqi doono shaqo ka caydhinta Quique Setien isla markaana uu magacaabi doono Koeman oo ay boqolkiiba 70% taageerayaasha Barcelona ka soo horjeedaan in kooxda loo dhiibo.
Laakiin waxa kale oo ay wararku sheegayaan in Bartomeu uu ku dhawaaqi doono in doorashada madaxtinimo la qaban doono March 2021 taas oo loo arko in ayna ahayn wixii ay jamaahiirta iyo ciyaartoyda muhiimka ahi doonayeen.
Haddii uu Bartomeu sii adkaysto joogitaankiisa Camp Nou isla markaana uu magacaabo tababare ayna ciyaartoyda iyo taageerayaashu doonayn waxaa suurtogal ah in xalaada kooxdu ayna isbadal samayn doonin oo ay soo dadajin karto bixitaanka Messi iyo ciyaartoy kale oo muhiim ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jamaahiirta kooxda Barcelona qalbiga u yara dajiyay in hadda la ogaaday in aanu Messi si rasmi ah u gudbin dalabka bixitaankiisa balse uu aad u nijadbsan yahay isla markaana uu sugayo sida ay xaaladu noqon doonto ee isbadalka la samaynayo.